စောစောပိုင်းက POST ဒါဆိုကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်နည်းနည်းလေးပြောပြပါရစေ။ ဤစာအရေးအသားအရကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်မိဘများနှင့်ရွယ်တူချင်းများအနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ကံကောင်းတာက၊ ငါကိုယ်တိုင်ဒီအကြောင်းကိုငါသိပြီးငါ့ရဲ့အလေ့အကျင့်အများစုကိုငါနင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
ငါအသက် ၁၄ နှစ်မှာငါစသောက်တယ်၊ ငါ့မိသားစုမှာအရက်ယမကာရှိတယ်၊ ငါ့အဖေကကောင်းကောင်းလည်ပတ်နေတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကငါ့မိသားစုရဲ့ဘဝအပိုင်းအခြားတစ်ခုလို့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမိုက်မဲတဲ့လုပ်ရပ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းလောက်မှာပင်ပေါင်းပင်နှင့်စီးကရက်များကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးအလွဲသုံးစားပြုခြင်းခံခဲ့ရသည်။ တစ်နေ့လျှင်စီးကရက် ၂ ထုပ်ခန့်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သောက်နေပြီဆိုလျှင်သုံးစီးခန့်ရှိသည်။ ငါမွေးဖွားခဲ့ပြီးအမ်စတာဒမ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ပေါင်းပင်တွေအလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်။ ငါမရပ်တန့်ခင်တစ်နှစ်မှာတစ်နေ့အနည်းဆုံးအဆစ် ၁၀ ခုဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ အားလုံးက ၃ နှစ်ကြာဆေးလိပ်သောက်ခဲ့တယ်၊ လေးနှစ်ကြာပေါင်းပြီး ၆ နှစ်လောက်သောက်ခဲ့တယ်။ တစ်ပတ်ကိုဘီယာ ၈၀ လောက်သောက်ခဲ့တယ်။ ယခုတစ်လတွင်ငါမသောက်ရ၊ ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း ၁၀ လခန့်လုံးလုံးသမ္မာသတိ ရှိ၍ နေခဲ့ပြီ။
ဘေးဖယ်နေ, ယေဘုယျနှင့်လောင်းကစားအတွက်အင်တာနက်ကိုလည်းအကြှနျုပျအဘို့ကိုအဓိကအားနည်းချက်တွေပါပြီ .. ကံကောင်းတာငါလွှတ်အဓိကအားနှင့်, ဒီအချက်အပေါ်မှာငါ့အားနည်းချက် သိ. ငါသည်လည်းဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘိန်းဖြူ, ကိုကင်းစသည်တို့ကိုတူသောခက်ခဲမူးယစ်ဆေးကိုရှောင်ရှားသူတွေကိုကနေနေဖို့ဂိမ်းစီမံခန့်ခွဲ ငါ Royal fuck ဆိုတဲ့ပါပြီလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရပ်တန့်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံ၏ပဒေသာနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်မှလာ။ ငါ့ကို PMO ဝေးအားဖြင့်သာငါကန်ဖို့ရှိသည်အခက်ခဲဆုံးအလေ့အထဖြစ်ပါသည်, သငျသညျပြောပြပါရစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်မအစာအိမ်နာကျင်တာကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်လိုခံစားချက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါ့အစာအိမ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတွန်းထုတ်နေတယ်၊ ​​တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်အော့အန်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းမလုပ်ခင် ၅ လခန့်ကြာခဲ့သည် (ဆရာဝန်များကကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာနှင့်ပြhavingနာရှိနေသည်ကိုအတိအကျသိရှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူခဲ့သည်။ ) ကျွန်ုပ်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ လေ့လာရေးနှင့်ငါ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်။ အလုပ်မှာ၊ ကောလိပ်မှာရှိတုန်းကနာကျင်မှု၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်အကြာတွင်ထပ်တူလက္ခဏာများလုံးဝမရရှိမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ထွက်ပေါ်လာသည့်မြက်ပင်အဖျားရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများတွင်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ငိုရခြင်း၊ နှာချေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖိအားများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားပေးခြင်းကဲ့သို့သောခံစားမှုမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကှေ့။
ဒါကြောင့်မသာငါတစ်စုံတစ်ဦးကအဆက်မပြတ်အစာအိမ်၌ငါ့ကိုရှုပ်နေခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်နဲ့တူခံစားတဝိုက်လမ်းလျှောက်ခဲ့စဉ်မပြတ်ငါဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ်ဒါကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အော်ဟစ်ခါနီးပေါ်သလိုခံစားရတယ်။ ဤသည်ငါ့ကိုအလုံးစုံစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောထိတ်တလန်တိုက်ခိုက်မှုစေ၏။
ဒါကြောင့် PMO ကိုရပ်လိုက်ခြင်းကငါ့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရရှိအောင်လုပ်နေတာပဲ။ ဒီအခြေအနေတစ်ခုလုံးကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆီသွားတွေ့စေတယ်၊ ​​ငါ့ကိုမသောက်တော့ဘူး၊ PMO ကိုပြaနာတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်စေတယ်၊ ​​ငါ့ကိုစပြီးတွေးတောဆင်ခြင်တယ်။
ငါ PMO ကိုအကြိမ်ကြိမ်မစမ်းခဲ့ဖူးပါ၊
-2 ရက်သတ္တပတ်မျှ PMO
2-4 ကာလ၏ -relapse, Bing
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်အဲဒီသီတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်မဖြတ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ယခုငါသင်တို့၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူမျှော်လင့်, ရက်ပေါင်း 90 မှရဖို့ကြိုးစားသွားမယ်!
18 သြဂုတ်လတစ်ရက် 1 ဖြစ်ပါတယ်။
အိုးငါထည့်ရန်မေ့လျော့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အချို့: ငါများသောအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 3-6 ကြိမ် PMO'd ။ ငါအသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာစတင်လေ့လာခဲ့ပေမဲ့ငါအသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ဟာအိပ်မပျော်တာကိုမှတ်မိပြီးလိင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလို့မထင်ပါနဲ့။ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး“ ယေရှု၊ ဒါပဲလား? ငါဒီပြthisနာကိုဒီကိစ္စနဲ့ပဲကြုံခဲ့ရတယ်!?” .. အခုတော့ငါအဲဒီအချိန်ကတည်းကလိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုလုံးဝမနှစ်သက်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင် PMO ကကျွန်တော့်ကိုနွေးထွေးမှုလိုဘဝရဲ့ပိုပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အပျော်အပါးတချို့ကိုခံစားချက်မဲ့စေခဲ့တယ်လို့ပြတယ်။
ငါလည်းအများကြီးပိုစွမ်းအင်ခံစားရတယ်, အစွန်းအပေါ်ပိုပြီးဒီတော့ငါ့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်ဘယ်မှာငါသိလို PMO မရသောအခါတက်ကြွ, အာရုံစူးစိုက်။
နိုဝင်ဘာလ 26, 2012
ငါ့ကိုမသိသောသူများအတွက် Primetime ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၁၀၀ လုံးလုံး abstinence ပြီးနောက်အပြာကြယ်ပွင့်ကိုရပြီဟုပြောရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီခရီးကိုကျွန်တော်စစတုန်းကဒီဝေးဝေးကိုရောက်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ ၁၄ ရက်ကြာတဲ့အထိတောင်မှမရောက်သေးဘူး။
ငါ PMO ရပ်တန့်မဖြစ်မှီငါသည်တွေ့ကြုံခံစားအရာအကျဉ်းမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်းယခုအချိန်တွင်အချိန်အတွက်ငါပြီးသား .. ငါနဲ့အတူဒုက္ခတွေအများကြီးရှိခဲ့သောအရာတို့ကိုအချို့ကိုသောက်သုံး, ဆေးလိပ်ပေါင်းပင်, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်စီးကရက်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့အရက်သောက်တစ်ပါတ် 10 ဘီယာမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်, ထိုရပ်တန့်ပြီးနောက် .. တစ်နေ့ joints ငါများသောအားဖြင့်, တယောက်ကိုတယောက်စွဲထံမှ phased က 10 နာရီနေ့အဘို့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနဲ့စတင်, ထို့နောက်ငါ 80 တဲ့အထိတိုးတက်။
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ PMO ဘဝမှာတစ်ဦးထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကစဉ်းစားတဲ့အခါ, ငါနှစ်အတွင်း fetishes အမျိုးမျိုးတို့ကိုရှောကျသှားပါဘူး။ Bestiality တစ်ချိန်ကငါ၏အရာတစုံတခုခဲ့ပေမယ့်နောက်ကျပါကအများအားဖြင့်စော်ကားသော, အရှက်ညစ်ညမ်းခဲ့သညျ။
ငါ 100 days ago ခဲ့လက္ခဏာများ (ကျနော် 1-10 စကေးပေါ်တွင်ပြင်းထန်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါကတိုးတက်ဘယ်လောက်ကိုသင်ပြောပြနိုင်):
War လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖောက်ပြန်ခြင်း (လိင်မှုကိစ္စတွင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစဉ်းစားရန်) 7/10
အဘယ်သူမျှမ PMO ၏ 100 ရက်အကြာမှာ?
•လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု = 2/10
•သေစေလောက်သောအရာ = သွားပြီ
• ဦး နှောက်မြူ = သွားပြီ
•မှားယွင်းလိင် = 1/10
အခုတော့ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး, ဤအမှုအရာအားဖွငျ့အကြှနျုပျတယ် "မ PMO" မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအချို့မှုတချို့ချွေးနှင့်အချို့သောမျက်ရည်ခေါ်သွားတယ်။ ထိုအခါစစ်တိုက်ရသေးကျော်သည်မဟုတ်, ယခုငါအဘို့အဆင်နွဲဖို့ကဝေးအလုံအလောက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တဦးတည်းအရာများအတွက်လူမှုစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်သင်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိသည်တစ်ခုခုရဲ့, ကရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဝေးလည်းညှိုးနွမ်းသွားကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ အပတ်တိုင်းသင့်အိမ်ပြင်ပတွင် Get နှင့်ပိုပြီးတိတိကျကျသင်တို့၏သက်သာဇုန်ပြင်ပ။ သငျသညျ, ထိုအေးမြင်သင်တို့၏သက်သာဇုန်ထဲကတစ်ခက်ရက်သတ္တပတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက .. သင်သည်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့အတွင်း၌နေထိုင်ရန်နိုငျသညျ, Chilling အချို့အိပ်စက်ခြင်းတွေပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ပြန်ရှေ့တန်းအပေါ်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ရန်သေချာစေပါ, အချို့သောမြည်းကန်သွားပါ။ သင်တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ငါ့ကိုပြောနှင့်ပြီမယ်ဆိုရင်ငါအျောဟစျပါ၏မယ်လို့ထင်ပါတယ်, နီးပါးအပတ်တိုင်းရက်သတ္တပတ်၏နောက်ဆုံးစုံတွဲတင်ပြချက်များခဲ့ပါတယ်။ ယခုမူကား? ငါအဆင်သင့်ပါပဲနဲ့ကျွန်မသူတို့ကိုလုပ်နေဖို့မျှော်လင့်! (ကျနော်မကြာခဏဒီအီမိုတီကွန်မသုံးကြဘူး, ဒါကြောင့်ဒီဒီမှာအလေးအနက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြစ်ပါသည်။ )
•အင်တာနက်ပေါ်မှအချိန်ကိုကန့်သတ်ပါ။ (ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုလာမည့်ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကိုကျွန်ုပ်တကယ်အောင်မြင်ချင်သည်။ )
•တစ်ပတ်လျှင် 3-4 ကြိမ်လေ့ကျင့်ပါ
•သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်သမ္မာသတိ ရှိ၍ ၎င်းဖြစ်နိုင်သည်!) နှင့်ထွက်သွားပါ။ ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်နေ့လည်စာအချို့ကိုသင်သောက်ပါ။ သင်သည်အရက်မူးသူများနှင့်အတူမနေလိုပါ။
•ပြီးတော့သေချာတာပေါ့။ FUCKING JOURNAL ။
အခုတော့ငါကဒီဖိုရမ်ကအပေါ်လူအပေါငျးတို့တွေ့ကြပြီမှတကယ်ဝမ်းသာတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ဘဝများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်, သင်သည်သင်၏ကြယ်အပေါင်းတို့၏အများဆုံးရတဲ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းများအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။ လာမယ့် 100 ရက်ပေါင်းမှတဆင့်ရတဲ့၌ငါ့ကိုကံဆန္ဒရှိ!
ဂျာနယ်မှ Link ကို by Primetime